Make sure you are ready to vote in the November 6 General Election - Somali | Multnomah County
Make sure you are ready to vote in the November 6 General Election - Somali
Salaasa Sebtambar 25, 2018
Xiriirka: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720
U Dabaal Deg Maalinta Diiwaangelinta Cod bixiyaha Qaranka Addoo xaqiijinaya Inaad diyaar u tahay Inaad Codayso Nofambar 6 Doorashada Guud.
Dimuqraadiyadu aday kaa bilaabantaa! U Dabaal Deg Maalinta Diiwaangelinta Cod bixiyaha. Qaranka Addoo xaqiijinaya Inaad diyaar u tahay Inaad Codayso Nofambar 6, 2018 Doorashada Guud. Doorashooyinka Degmadda Multnomah waxay ku biir taa 3.500 oo la shaqeeyayaal wadanka oo dhan dabaaldega Maalinta Diiwaangelinta Cod bixiyaha Qaranka iyaddoo la caawinayo cod bixiyayaasha cusub inay is diiwaangeliyaan si ay u codeeyaan oo u cusboonaysiiyaan macluumaadkooda diiwaangelinta codbixiyaha xagajadwal u samaynta dhacdooyinka degmadda.
Oktoobar 16 waxaa ku eeg isdiiwaangelinta cod-bixiyaha ee Doorashada Guud ee Noofambar 6. Cod-bixiyayaasha Oregon waxay iska diiwaangalin karaan onlayn www.oregonvotes.gov/register ama waxay buuxin karaan Kaarka Diiwaangalinta Cod-bixiyayaasha ee Oregon oo laga heli karo xafiiska doorashooyinka, maktabadda dadweynaha, Oregon DMV, ama xafiiska boostada. Qof kasta oo kamid ah 522,000 cod-bixiye ee Degmada Multnomah ee u qalma inay codeeyaan waxay heli doonaan waraaqaha cod-bixinta toddobaadka ugu danbeeya Oktoobar.
Multnomah County Elections waxay ka dalbanaysaa cod-bixiyayaashu inay xaqiijiyaan cinwaankooda, xisbiga ay taageerayaan, iyo magacooda ku qoran duwaanka cod-bixiyayaashu in uu sax yahay. Cod-bixiyayaasha waxay ka baddali karaan macluumaadkooda internetka iyaga oo booqanaya www.oregonvotes.gov/myvote ama sita Kaadhka Diiwaangalinta Cod-bixiyayaasha Oregon. Cod-bixiyayaasha safar ku maqnaanaya maalinta doorashadu waa inay dalbadaan warqadda cod-bixinta maqnaanshaha si loogu soo diro cinwaankooda kumeel gaadh ah. Cod-bixiyayaashu waa inay booqdaan si ay u akhristaan Su'aalaha Badanaa Leys Weydiiyo ee Doorashayooyinka bit.ly/MultCoAbsentee ama waa inay la soo hadlaan xafiiska Doorashada Degmada Multnomah si ay u helaan kaalmo codsashada waraaqaha cod-bixinta maqnaanshaha sida ugu dhakhsaha badan.
Codbixiyayaasha waxay isku diiwaangelin karaan si ay ula socdaan codbixintooda una helaan dhejiska aan la taaban karin ee "Waan codeeyay". Fariin, iimayl, ama wargelin cod ah ayaa u sheegaya cod-bixiyeyaasha markii xafiiska doorashada gobolka ayay boosta soo dhigaan. Wargelino ayaa muujinaya haddii cod-bixinta la aqbalay in la tiriyo ama haddii ay cod-bixiyaha uga baahantahay ficil dheeraad ah. Gudaha farriinta “Warqadda Cod-bixinta la Oggolaaday”, waxay cod-bixiyayaasha ka heli istikarka gaarka ah ee Oregon ee “Waan Codeeyay” oo ayna ku wadaagi karaan bogaggooda warbaahinta bulshada. Cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah waxay iska diiwaangalin karaan iyagoo booqanayamultnomah.ballottrax.net.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka furaysaa goobteeda labaad, Voting Center Express ee Gresham ku taala doorashadan. Goobta Cod Bixinta Degdega ah waxay ka furnaan doontaa Oktoobar 22 - Noofambar 6 gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah. Cod-bixiyayaashu waxay awoodi doonaan inay baddalaan warqadaha cod-bixinta lumay, helaan kaalmo codaynta ah, su’aalo waydiiyaan, ama waxay iyaga oo socda iman karaan si ay u codeeyaan Goobta Cod Bixinta ee ku taala 600 NE 8th Street ee suuqa hoose ee Gresham.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxaa laga helayaa turjubaan bilaash ah oo uu heli karo qof walba oo u baahan in lagu caawiya inuu ku codeeyo luuqad aan af Ingriis ahayn. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka oo ku qoran sagaal luuqadood waxa laga heli kara bogga multco.us/education-and-outreach. Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay doonaysaa in dhammaan cod-bixiyayaashu ay awoodaan in ay u codeeyaan si fudud, gaar ah oo madaxbannaan, fahmaan tallaabooyinka cod-bixinta, fahmaan xeerarka doorashooyinka, ayna ogaadaan cida ay caawimaad weydiisanayaan.
Celebrate National Voter Registration Day by Making Sure You're Registered to Vote
Celebrate National Voter Registration Day by making sure you are ready to vote in the November 6, 2018 General Election